Red Hat Inobvisa MongoDB kubva kuRHEL 8 uye Fedora Nekuda kweSSPL License | Linux Vakapindwa muropa
Kwekupedzisira Gumiguru, Eliot Horowitz, technical director uye mushandirapamwe weMongoDB vakaita chiziviso iyo yakagadzira nyonganiso munharaunda yakavhurika sosi. kugadzirwa kweineni yakavhurwa sosi rezinesi, iyo Server Side Ruzhinji Rezinesi (SSPL) yeiyo inozivikanwa Gwaro Rakatemerwa Dhatabhesi Management System.
Iri rezinesi rinoshanda kune ese mavhezheni eMongoDB akaburitswa kana kuburitswa mushure Gumiguru 16, 2018 uye inotsiva rezinesi reAGPLv3. Izvo zvinoshandawo pazvimedu zvezvinyorwa zvekare zveDBMS.
Muchidimbu, Eliot Horowitz akatsanangura kuti shanduko iyi yaive yakagadzirirwa kuronga kushandiswa kweDBMS sevhisi.
Vazhinji vanopa gore masevhisi, kusanganisira makuru evanopa, vanovimba neDBMS kodhi kodhi kununura zvinyorwa zvebhizimusi kune vashandisi pasina kutevedzera yakavhurwa sosi mitemo.
"SSPL yakagadzirirwa kuona kuti makambani anopa MongoDB (kana chero software yakaunzwa kuSSPL) sevhisi inodzosera kunharaunda."
"Kana iwe ukaita chirongwa chechirongwa kana vhezheni yakashandurwa kuti iwanikwe kune vechitatu sevhisi, kodhi yekodhi inofanirwa kurodha pasi pamasaiti epachena. «
Saka zvaHorowitz, SSPL inongotsanangudza mazwi ekuti iyo MongoDB iwanikwe sevhisi.
"SSPL inoenderana nemweya weAGPL, asi inojekesa mamiriro ekupa software yakavhurika senge sevhisi.
Iyo rezinesi inovandudza rusununguko rwese rwakavhurika sosi yenharaunda neMongoDB pasi peAGPL: rusununguko rwekushandisa, kuongorora, kugadzirisa, uye kugovera patsva software.
Shanduko chete yakakosha chinhu chinodikanwa chekuti chero sangano richiyedza kushandisa MongoDB sevhisi inofanira kuvhura software yainoshandisa kupa iyo sevhisi. Kuchinja kwerezinesi uku hakuzokanganisa vatengi vanenge vatenga rezinesi rekutengesa reMongoDB, "akadaro.
SSPL v1 yakaendeswa kuti iongororwe neiyo Open Source Initiative (OSI) asi haisati yatenderwa.
1 Uye dambudziko ...
1.1 Red Hat haidi matambudziko, zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemazvo
Uye dambudziko ...
Izvi zvinoreva kuti shanduro dzeMongoDB pasi peiri rezinesi hadzisi sosi yakavhurika. Imwe vhezheni yelayisensi (SSPL v2) iyo zvakare yakafemerwa haigonese iyo OSI.
Para muchos, iyo nyowani MongoDB SSPL rezinesi rinobuda kubva kumweya weyakavhurwa sosi. Kune vamwe vavo, SSPL yaigona kungobvumirana naSteve Ballmer, aimbova CEO weMicrosoft, paakataura kuti rezinesi reGPL reLinux raive "kenza yakabatana, mupfungwa yezvinhu zvepfungwa, nezvose zvinobata."
Red Hat haidi matambudziko, zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemazvo
Red Hat, yechikamu chayo, yakasarudzawo kubvisa MongoDB kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvayo.
"Mushure mekuongorora, Fedora akagumisa kuti Server Side Ruzhinji Rezinesi v1 (SSPL) haisi rezinesi remahara software, "akanyora Tom Callaway, Fedora Engineering Manager, mutsamba muna Ndira 15, 2019."
Fedora anotenda kuti SSPL yakagadzirirwa kuumba rusarura runopesana nechimwe chikamu chevashandisi.
Uyezve, zvinoita sezviri pachena kuti chinangwa chemuridzi wemvumo ndechekugadzira kutya, kusava nechokwadi uye kusahadzika pakati pevashandisi vekutengesa software pasi peiri rezinesi.
Kufunga iyo SSPL se "yemahara" kana "yakavhurika sosi" inogadzira mumvuri uyu pamusoro pemamwe marezinesi muFree uye Open Source Software (FOSS) ecosystem, kunyangwe kana pasina kana chimwe chingaisa njodzi iyi,
Uye kunyangwe neiyo v2 vhezheni yeSSPL iri kuvandudzwa, Tom Callaway anotenda kuti dambudziko ririkuenderera.
Saka "isu takavandudza yedu runyorwa rwe" zvisiri izvo marezinesi "kuisa SSPLv1. Hakuna software iri pasi peiri rezinesi inogona kuiswa muFedora, "anodaro Red Hat mainjiniya.
Pamusoro peFedora, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) yakafunga zvakare kubvisa MongoDB mune yayo inotevera vhezheni.
Mune zvinyorwa zveRHEL 8, Red Hat yakabvisa MongoDB kubva pane zvinyorwa zvevashandi vepa database zvakapihwa kugovera.
"RHEL 8 inopa anotevera database maseva: MySQL 8.0, MariaDB 10.3, PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.6, uye Redis 4.0.
Ndokumbira utarise kuti iyo MongoDB NoSQL dhatabhesi server haina kuiswa mune beta vhezheni yeRHEL 8.0 nekuti inoshandisa iyo server-parutivi Ruzhinji Rezinesi (SSPL), "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Red Hat inobvisa MongoDB kubva kuRHEL 8 uye Fedora nekuda kweiri rezinesi reSSPL